Isticmaalka maalgelinta maalgashiga si loo ilaaliyo guryaha la awoodi karo waa hal tusaale oo cusub
Fahamka Innovation at McKnight
Hoos waxaa ku xusan madax-bannaani cusub ee madaxwaynaha xasaasiga ah ee Kate Wolford dhowaan u diyaarsanaa guddiga maamulka ee ku saabsan sida aan uga fikirno naqshadeynta.
Inkasta oo qeexitaanadu kala duwan yihiin, isbeddelka guud wuxuu loola jeedaa hababka cusub, alaabooyinka, ama adeegyada oo abuuraya qiimo muhiim u ah dadka isticmaala. Dhaqanka ururka McKnight Foundation wuxuu taageersan yahay fikrado cusub oo kobcinaya shuruudaha lagu hormarinayo deeq bixiyayaasha iyo iskaashiga. Waxaad oran kartaa naqshad waa DNA-da, tan iyo aasaasaheena William L. McKnight wuxuu hogaamiyay shirkadda 3M si ay u noqoto duni caan ah oo loogu talagalay naqshadeeda.
In our 2015-2017 Qaab-dhismeedka istaraatiijiga ah, waxaan ku aqoonsaneynaa hal-abuurka qiimaha asaasiga ah waana qeexaynaa sida soo socota:
Anaga iskaashi iyo kuwa kale
imtixaan iyo horumar fikradaha cusub iyo waddooyinka
si wax looga qabto dhibaatooyinka adag.
Dhaqanka Ururada iyo karti-xirfadeedka ee aanu kobcinaynaa qeexitaankaan. Nasiib wanaag wax kasta oo aynu qabano waa kuwo la socda iyo kuwa kale. Innaga, naqshadeenu maaha mid dhameystiran, laakiin waa habka loo kordhiyo saameynteenna waxaanu gacan ka geysanaynaa kaabayaal bulsho oo xasilan oo wax ku ool ah oo juquraafi ah oo aynu ka shaqeyno.
"Dhaqanka Ururada iyo karti-xirfadeedka ee aanu kobcinaynaa qeexitaankaan. Dhamaanteen wax walba oo aan sameyno waa ayaga iyo kuwa kale. " -KADO QAABKA, KULANKA
Wadashaqeyn: Sida aasaaska deeq-lacageedka, waxaan kor u qaadnaa hadafyadeenna iyada oo la adeegsanayo deeq-lacageed iyo kaalmo-dhaqaale aan cid kale la siin. Sida aan ula shaqeyneyno deeq bixiyayaasha iyo sida aan u bixinno taageerada waxay si wayn u xakamayn kartaa ama kor u qaadi kartaa kartida qofka ruqsad bixiyaha ah si uu u kobciyo fikirkiisa cusub iyo awoodiisa. Taageero dheerad ah, iyo taageerada aan kaalmada ahayn ayaa badanaa ah qodobo muhim ah oo u saamaxaya deeq bixiyayaasha inay yeeshaan saldhig shaqo oo xasilloon oo ay tijaabin karaan fikrado cusub waxayna halis gelinayaan siyaabo cusub oo loo shaqeyn karo.
Waxaa laga yaabaa inay u muuqato in wax laga yiraahdo in laga hadlo ku saabsan hal-abuurka leh deeq bixiye waxaan taageernay 10 sanno ama in ka badan, sababtoo ah ururkani ma aha mid cusub. Dhab ahaan, maalgelinteena xasiloonida, xiriirka aamminaadda ee taageera khatarta qaadida deeqda, iyo kalsoonidii ay taageerada McKnight u leedahay, waxay si macquul ah uga qayb qaadan kartaa awooda deeq bixiyuhu inuu noqdo mid cusub oo tijaabiya waxyaabo cusub. Waxaan ku dhiirigelineynaa, xushmeyneynaa, waan ku dhiiri gelineynaa, xitaa midba midka kale isa saarnaa si aynu u fekerno oo u dhaqanno si ka duwan sida aan u raadineyno hadafyada la wadaago. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay nidaamyada ku salaysan nidaamka ku salaysan isbedelka shaqada, taas oo ah mid adag oo u baahan inuu fahmo qoto dheer oo macnaha guud.
Marka lagu daro wadashaqeyn la siiyo dadka qaata, inta badan ee aan faa'iido doonka ahayn, waxaan aqoonsannahay in siyaabo cusub loo fahmo iyo wax qabashada inta badan soo baxaan isgoyska kala duwan. McKnight waxay ka qayb qaadataa, inta badan waa hogaamiye danwadaag ah, qaybo kala duwan (dadweyne, gaar ah, bulsho), iyo iskuduubasho, wada shaqeyn. Fikradda fikradda cusub waxay u baahan tahay in shaqaaluhu ay jimicsi qoto dheer ku sameeyaan barnaamijyo gaar ah iyo goobo khibrad leh si aan u ogaano fursadaha isgoysyada arrimaha kala duwan, hababka, iyo aragtiyaha.
Fikradaha cusub iyo jidadka cusub: Tani waxay la socotaa qeexidda guud ee naqshadeynta sida badeecooyinka cusub, geedi socodka, iyo adeegyada oo ku daraya qiimo macno leh. Sida kor ku xusan, tan badanaa waxay ku saabsan tahay kobcinta shuruudaha taageera naqshadeynta deeq bixiyeyaasha iyo bixinta raasumaal khatar ah. Waqtiyada kale, waxay ku saabsan tahay ururada taageeraya ee nagu cusub, ama fikradaha / mashaariicda nagu cusub ama ku cusub beerta. Inkasta oo heerka iyo nooca halistu ay kala duwan tahay, waxaa jira guud ahaan heer sare oo aan hubin iyo khatarta la xiriirta cidda cusub, natiijooyinkuna way kala duwanaan karaan ama ma dhicin wixii aan rajeyneyno. Iyadoo la adeegsanayo ficil la qabadsiiyo, waxaynu raadinaynaa in aan wax badan ka barano "guul darrida" sidii "guul."
Dhibaatooyinka adag: Waxaan ka shaqeyneynaa inaan bedelno nidaam si siman oo aan si joogta ah ugu adeegno dadka iyo meeraha. Waxaan diirada saarnaa naqshadeynta gudaha qaabab dhaqaale, bulsho, iyo dabiici ah. Mararka qaarkood waxa loo yaqaan "dhibaatooyin xun," ama "caqabado waawayn", arimaha aan ka shaqeyno xalalka fudud ee fudud. Inkasta oo mucjiso caan ah ay tahay in hal-abuurnimo uu yahay daqiiqad eureka ah, hadana inta badan waxay ka timaaddaa falal badan oo is wehlinaya. Isbedelka nidaamyada, waa muhiim in aan sii waarno wakhti xitaa iyadoo laga yaabo in aan dareemeyno in aan dareemeyno inaan aragno natiijooyin degdeg ah.
Waxaan diirada saarnaa naqshadeynta gudaha qaabab dhaqaale, bulsho, iyo dabiici ah.
McKnight wuxuu ka mid ahaa aasaaskii ugu horeeyay ee lagu qaato waxqabadyada la qabsashada iyo barashada maqnaashaha sida habka ugu muhiimsan ee habka ugu habboon ee looga shaqeynayo dhibaatada. Isdheelsiinta talaabooyinka la qabsashada ayaa lagu kulmaa noo Barnaamijka Cilmi Baarista Iskaashatada, kaas oo loogu talagalay inay ka wada shaqeynayaan dhinacyada kala duwan, qaybaha, iyo joqraafiyada. Waxaan hirgelinay tallaabooyin la qabsoomay waxaana bilaabay inaan horumarinno aqoonta aasaasiga ah ee aasaasiga ah ee habka iyo qalabkiisa iyada oo qayb ka ah Nidaamka Istaraatijiyadeed ee ugu horeeya ee aasaasiga ah. Ficil u-qalanta waxay taageertaa fikrado cusub, waana ku haboon tahay shaqadayada nidaamyo adag.
Sideed u qeexaysaa hal-abuurka? Sidee ururkaagu u kobciyaa fikir maskaxeed? Isgaadhsiinteena ku saabsan warbaahinta bulshada.
Kajawaabida su'aalahaaga ee ku saabsan Kala-guurka Meelaha McKnight
Khayraadka Webka Sebtember 2019